Alakamisy 07 Febroary 2019. – FJKM
Alakamisy 07 Febroary 2019.
2 Samoela 22.1-19
Hira fiderana no iombonantsika amin’i Davida eto:
1-Anehoany ny fifamatoram-pisiana eo aminy sy ny Tompo(and2-3)
Ny Tompo , hoy izy dia « harambatoko, batery fiarovana, Mpamonjy, fiarovana avo ho ahy sy fandosirako, vatolampiko, ialofako, ampingako, tandroko famonjena ». Etsy ankilany : ahy Izy ary Azy aho. Izany no ambarany. Isika izay mahalala an’i Jesoa , Tompon’ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany (Mat 28.18) , mba afaka miteny toy izany koa ve?
2-Anambarany ny fomba ifandraisany amin’ny Tompo (and4-7). »Miantso an’i Jehovah izay mendrika hoderaina aho, ka dia vonjena ho afaka amin’ny fahavaloko » (and4). Izay no tsiambaratelon’ny fandreseny : ny fifandraisany amin’ny Tompo amin’ny alalan’ny vavaka. Iza amintsika no tsy mbola nanandrana ny hasarodin’ny vavaka mahavonjy?
3-Ankalazainy ny fidiran’ny Tompo an-tsehatra hanatanteraka famonjena (and8-10). Sary an’ohatra no itantarany ny fahatongavan’ny Tompo hamonjy azy . Famonjena azo antoka satria Mpamonjy mahery , azo antoka no miady ho,azy. Isika koa , ao amin’i Jesoa Andriamanitra tonga nofo , mpandresy isika . Andriamanitra amintsika Izy .